Suuriyiin magan-gelyo doon ah oo dalabkoodii ku heley diidmo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Suuriyiin magan-gelyo doon ah oo dalabkoodii ku heley diidmo
Looma dhoofin karo dalkoodii maadaama uu dagaal ka socdo
La daabacay torsdag 5 september 2013 kl 09.52
Suurtagal maahan in lagu andacoodo in amar la isku siiyey iyada oo middaa la iska dheereeyneyo in gacan laga geeystey falal la xiriira dembiyo dagaal, sida uu qorayo xeerka hayadda socdaalka ee dalkan Iswiidhen. Halka ey jiraan shuruudo khasab ah in la caddeeyo in shakhsigu uu gacan ku lahaa dhacdooyinka wax-yeelooyinka labada garab ee is hardineya intii aannu ka soo ambabixin, si diidmo looga iiyo dalabkiisa magan-gelyo.
Illaa iyo hadda toban ka mid ah soo-galootiga suuriyaanka ee magan-gelyada dalkan ka dalbaday ayaa diidmmo ku heley dalabkoodii iyo tuhun laga qabo iney gacan ku lahaayeen dagaallada sokeeyo. Iyada oo qaar badan oo ka mid ah soo-galootiga suuriyaanka ee dalkan ka dalbada magan-gelyada sheegaan iney ka soo baxsadeen ciidanka milateriga oo ey ka tirsanaayeen. Annaga oo ku war-gelina hoowl-wadeennada gacan-yareyaasha hayadda iney wareeysiyo ku habboon la yeeshaan ama weydiiyaan su'aallaha loo baahan yahay ruuxa magan-gelyada dalbanaya, sida uu sheegay Lennard Eriksson, oo ah khabiir ka howl-gala hayadda socdaalka:
- Waa xaalad aad u adag. Waxaan wareeysiyo la yeelanaa dhammaan qaxootiga dalkan magan-gelyada u yimaada. Middaa tuhunka aan ka qaadno waxay tahay war-bixinnada ka soo baxa wareeysiyadaa. Iyo iney warar naga soo gaaraan meelo kale oo ka bax-san wareeysiyada.
Su’asha meesha taal ayaa haddaba a, xaggey ku dambeeyn haddaba dadyoowgaasi? Inkastoo aaney hadda suurtagal ahayn in dib loogu celiyo Suuriya:
- Haddii maxkammadu xukun ku rido, way gaari kartaa go’aan ah in dalka laga masaafuriyo. Dhanka kale waxaa jira hab lagu diidi karo in magan-gelyo lagu siiyo, sida uu qabo xeerka caalamiga ee Geneva. Markaa hayadda ayaa suurtagal u leh iney dalka ka masaafuriso, Sida uu sheegay Lennart Eriksson.